लागुऔषध सहित ललितपुरबाट ५ जना पक्राउ - Nepal No 1 News - Bishwokhabr.com
लागुऔषध सहित ललितपुरबाट ५ जना पक्राउ
काठमाडौं । ललितपुरबाट प्रहरीले लागु औषध कारोबारमा संलग्न ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । गोदावरी नगरपालिका–३ स्थित नौधाराबाट जेठ २१ मा राज महर्जन र कृष्ण कुमार बिकलाई पक्राउ गरेको थियो । पछि थप ३ जना पक्राउ परेका हुन् ।
उनीहरुको बयानका बालकुमारी र ग्वार्को क्षेत्रबाट थप ३ जनालाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोवाटोका डिएसपी दिनेश घिमिरेले रातोपाटीलाई बताए । पक्राउ पर्नेमा शक्तिलाल साहु, राजकुमार शाह र रुपेश बादिकार छन् ।
इन्सपेक्टर हरी ओली नेतृत्वको टोलीले आरोपीहरुको साथबाट ५९ एम्पुल डाइजेल्याव, ६२ एम्पुल नुफ्रिन र ५९ एम्पुल फेनारगन बरामद गरेको छ । आरोपीहरुमाथी प्रहरीले लागु औषध मुद्दामा म्याद लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
सांसद नरोत्तम वैद्यविरुद्ध फौजदारी कसुरमा मुद्दा दर्ता !
काठमाडौं उपत्यकामा एक साता निषेधाज्ञा थपियो, के-के खुल्छ ?
मेलम्चीको सुरुङ निरीक्षण थालिने, पानी आपूर्ति बन्द हुँदै